DHAGEYSO Maamulka Puntland oo sheegay inay soo bateen dadka soo galootiga ah. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Maamulka Puntland oo sheegay inay soo bateen dadka soo galootiga ah.
Madaxweyne kuxigeenka maamul Puntland Cabdi Xakiin Xaaji Cumar Camey oo Warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay korortay tirada ajaaniibta soo galeysa deegaanada maamulkaas iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Waxa uu tilmaamay in Hal sano gudaheeda ay degaanada maamulka Puntland yimaadeen dad ajaaniib ah tiradoodu aad u badan tahay taasina ay keeneyso inay ka bataan dadkii u dhashay deegaanadaas hadii aan xad loo sameynin soo galootiga faraha badan.
Cabdi Xakiin Xaaji Cumar Cameey Madaxweyne kuxigeenka maamul Puntland wuxuu faray hay’adaha amniga ee mamaulkiisa inay waajibaadkooda gutaan ayagoo aan cidna ku xadgudbayn dadka ajaaniibta ah ayuuna ugu baaqay inay soo maraan wadada sharciga ah si aysan imaanshahooda dhibaato uga dhalan.
← DHAGEYSO Taliska Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen doomo ay shabaabku lahaayee.
Israa’iil oo duqeymo ka fulisay Qaza →
Khasaare ka dhashay Shil ka dhacay duleedka Muqdisho January 21, 2019
Mudo kordhin loo sameeyya golaha guurtida Soomaaliland. January 21, 2019
Abaanduulaha booliska oo sheegay in ciidamada ay iska caabiyeen koox xalay soo weerartay shimbireey January 21, 2019
Madaxweynaha Hirshabeele oo sheegay inay jiraan shaqsiyaad abaabulayo dagaalo beeleedyada. January 21, 2019
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka hadlay xariga Roobow Abuu Mansuur. January 21, 2019
Mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo ku baaqay inaan hub loo ogolaan shacabka iyo masuuliyiinta kale. January 21, 2019
Hay’adda Oxfam oo ku talisay in canshuur dheeraad ah la saaro maalqabeenada caalamka January 21, 2019
Musalia Mudavadi oo ka hadlay qaabka lagula dagaallami karo argagixisada January 21, 2019
Khasaare ka dhashay Shil ka dhacay duleedka Muqdisho
Mudo kordhin loo sameeyya golaha guurtida Soomaaliland.
Abaanduulaha booliska oo sheegay in ciidamada ay iska caabiyeen koox xalay soo weerartay shimbireey
Madaxweynaha Hirshabeele oo sheegay inay jiraan shaqsiyaad abaabulayo dagaalo beeleedyada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka hadlay xariga Roobow Abuu Mansuur.
Mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo ku baaqay inaan hub loo ogolaan shacabka iyo masuuliyiinta kale.
Hay’adda Oxfam oo ku talisay in canshuur dheeraad ah la saaro maalqabeenada caalamka
Musalia Mudavadi oo ka hadlay qaabka lagula dagaallami karo argagixisada